घरमा बुवा हुँदाहुँदै परपुरुषसँग लागेकी आफ्नी आमाको बारेमा जब छोरीले सामाजिक संजालमै यस्तो लेखिन – List Khabar
Home / समाचार / घरमा बुवा हुँदाहुँदै परपुरुषसँग लागेकी आफ्नी आमाको बारेमा जब छोरीले सामाजिक संजालमै यस्तो लेखिन
admin December 6, 2021 समाचार Leaveacomment 157 Views
आमा छोरीको सम्बन्ध धेरै अटुट र विश्वासको हुन्छ । छोरीले आमालाई साथी सम्झेर आफ्नो मनको सबै कुरा आफ्नो अगाडि राख्छन्। तर, लन्डनमा आमा छोरीको स’म्बन्ध ठीक उल्टो छ। महिलाले आफ्नी आमासँगको स’म्बन्धको सत्यता बताउँदै स’म्बन्ध पो’र्टलमा विज्ञको राय मागेकी छिन् । महिलाले लेखेकी छिन्, ‘मैले मेरी आमाको गो’प्य कुरा वर्षौंदेखि मानिसहरूबाट लुकाएर राखेको छु । आमाको धेरै अतिरिक्त वैवाहिक स’म्बन्धहरू थिए र उनको रहस्य मलाई मात्र थाहा थियो। उनले मलाई अर्को पुरुषसँग कस्तो महसुस गर्यो भनेर बताउन कहिल्यै हिचकिचाएन।
महिलाले लेखेकी छिन्, ‘आमाले सधैं बुवालाई बेवास्ता गर्नुहुन्थ्यो, बाहिरी परपुरुषसँग आफ्ना इच्छाहरु पुरा गर्ने । आमाले मलाई सधैं भन्नुहुन्थ्यो बुवासँगको स’म्बन्ध कति खराब छ र जीवनमा निराश महसुस गर्नुहुन्छ। १० वर्षको उमेरदेखि नै आमाको स’म्बन्धका कथा सुन्दै आएको छु । उसले मलाई मेरो बुबाबाट पनि अलग गरिन। आमाको सम्पूर्ण परिवार र साथीहरू बीच, उनीसँग धेरै राम्रो र नम्र बानीबेहोरा छ। यति मात्र होइन मेरी छोरीले पनि उनलाई आफ्नो रोल मोडल मान्छिन् । उनको स्नातक समारोहमा पनि छोरीले आमालाई बोलाएकी थिइन्, टिकट नहुँदा म त्यहाँ जान सक्दिनँ । अब म मेरो जीवनको यो चरणमा पुगेको छु जहाँ म मेरी आमासँगको सबै स’म्बन्ध समाप्त गर्न चाहन्छु।
म भाग्यमानी छु कि म मेरा छोराछोरी, श्रीमान् र साथीहरूसँग खुसी जीवन बिताइरहेको छु तर आमासँगको मेरो सम्बन्ध मलाई वि’षा’क्त लाग्छ। मेरो चिन्ता यो छ कि मैले मानिसहरूलाई उनीहरूसँगको सम्बन्ध अन्त्य गर्नुको कारण बताउनुपर्छ। मानिसहरूले उनलाई आदर्श नारी ठान्छन्, त्यसैले मानिसहरूले मेरो कुरालाई विश्वास गर्दैनन्। म आफ्ना छोराछोरीका अगाडि उनीहरुको रहस्य खोल्न चाहन्न न त उनीहरुको छवि धमिलो पार्न चाहन्छु तर उनीहरुलाई मेरो जीवनबाट कसरी हटाउने भन्ने बारेमा मैले सोचिरहेकी छु ।
उनको यो अनुरोध पछि सल्लाह दिँदै विज्ञले लेखेकी छिन्, ‘आफूलाई हलुका राख्न तिम्री आमाले आफ्नो सारको बोझ तिमीमाथि राख्नुभएको छ । पक्कै पनि तिमीले धेरै दुःख भोगेकी छौ। यति मात्र होइन, तिमीलाई बुवाबाट पनि अलग गरिएको थियो । के तिमि आफ्नो आमालाई उहाँको कार्यले तपाईंलाई कस्तो असर गरेको छ भन्न सक्नुहुन्छ? तिम्री छोरीको स्नातक समारोहमा जाँदा तिमिलाई कस्तो लाग्छ बताउनुपर्छ। तिमिले यी सबै कुरा उहाँलाई खुलेर भन्नुपर्थ्यो। यो उमेरमा पनि तिमीले आमाको यो स’म्बन्ध बिर्सेकी छैनौ। तिम्रोको आमाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, उहाँले तिमिलाई विश्वासको स्थान दिएर तिमिसँग आफ्नो सम्बन्ध सुधार गर्दै हुनुहुन्छ, जुन गलत थियो। सम्बन्ध कायम राख्न यो सही तरिका होइन। मनको बोझ हलुका गर्नको लागि, तिमिलाई ती सबै कुराहरू लेख्न सक्छेउ जुन तिमिलाई सताइरहेको छ।
Previous बिहानै बासी मुखमा पानी पिउँदा शरीरमा के हुन्छ ? सबैले जानी राखौं
Next कोरोना ओमिक्रोन : भारतमा एकैदिन सङ्क्रमित यति धेरैले बढे, नेपालमा चिन्ता